मियुलीले आफ्नो ट्विटरबाट हातहरू लिनको लागि तरिकाहरू प्रदान गर्दछ क्रिएटिव अनलाइन
को हात तान्न को लागी केहि जटिल हो। वास्तवमा, शास्त्रीय चित्रकलाका महान चित्रकारहरूले आफ्ना सहायकहरू र प्रशिक्षार्थीहरूको लागि तिनीहरूको हात छोडे। तर मियुलीका यी ठूला चालहरूका लागि धन्यवाद सबै कुरा सजिलो हुनेछ।
कुरा छ हामी के चित्रण गर्दैछौं त्यसको वास्तविक विचार र अलि सानो तर्क लागू गर्नुहोस्लाई मानव शरीरको ज्ञान, यसको कंकाल र मांसपेशिहरूको साथ, महत्त्वपूर्ण महत्त्वको छ र वास्तवमा यो आफैंले अध्ययन गरेको छ पछि राम्रोसँग सबै प्रकारका पोजहरू आकर्षित गर्न सक्षम हुन।
सत्य यो हो कि मिउलीको ट्वीटहरू छविहरूसँग जुन देखाउँदछ हातहरू तान्ने केही तरिकाहरू ठूलो मूल्यका हुन्छन्। हातको हत्केला जस्तो बाहिरी बाहिरी जम्मै घुमावदार हुन्छ जब यो पूर्ण रूपमा खोल्दछ, वा न theहरू जस्तै, जब तिनीहरू लामो हुन्छन्, तिनीहरू तल झर्दछन्।
हात र न nailsहरू रेखाचित्रमा नोट pic.twitter.com/S2C20dWsfk
- मियुली ??? (@miyuliart) अगस्ट 16, 2019
यस्तै हुन्छ नेल ज्यामिति त्यो सामान्यतया तीन सिधा ठाडोहरू हुन्छ जुन ए angle्गलमा थुप्रै क्रसिंगको साथ सधैं औंलाको यस तत्वको आकार मनमा राख्न।
एक साधारण चित्रण छवि हामी केहि सल्लाह पाउन सक्छौं हातहरू कसरी तान्ने भनेर हामी राम्रोसँग बुझ्नको लागि सधैं अनुसरण गर्नुपर्दछ। परिप्रेक्ष्यमा र कर्भहरू तुरुन्तै औंलाहरूको समानुपातिक रूपमा परिवर्तन हुन्छन् जुन हड्डीमा आफैंको दूरी के हुन्छ भनेर लम्बाइमा थप्दछ।
जस्तो कि हामी सँधै सिफारिस गर्दछौं, जति हामी चित्रण गर्दछौं त्यति नै हात तान्न सजिलो हुन्छ। र सधैं मेट्न इरेरको हात छ नराम्रा सबै कुरा ट्वीटको शृंखलामा इलस्ट्रेटर आफैंले संकेत गरेझैं हात तान्दा के नगर्ने भनेर तपाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं उनको पछिल्ला चालहरू जान्नको लागि उहाँलाई अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी हात ड्राइंगको सबै मास्टर बन्नुहुन्छ। एक बिट धैर्य, प्रतिभा र तप र ती तपाइँको हुनेछन् कि तपाइँको पात्रहरू अधिक अर्थपूर्ण र वास्तविक छन्। हामी तपाईंलाई छाड्दछौं यी फोटोशप ह्यान्डशेक्सको साथ.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » मियुली द्वारा हात तान्ने केहि युक्तिहरू
क्रोकस जुत्ता ब्रान्ड लोगोको अवधारणाले यसलाई स्फूर्तिदायी नयाँ "लुक" दिन्छ